Oggolaansho la wargeliyey Waa fikrad-qaar ka mid ah ayaa dhihi kara aasaas jaceeylka u dhow (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) anshaxa cilmi -in. Version ugu fudud ee anshaxa cilmi leeyahay, "oggolaansho la wargeliyey wax walba." Tani sharci fudud, si kastaba ha ahaatee, ma aha waafaqsan mabaadii'da jira anshaxa, xeerka anshaxa, ama dhaqanka cilmi. Halkii, cilmi-waa, karaa, oo samayn raaco xeerka sii adag oo kale, ". Nooc ka mid ah ogolaanshaha cilmi ugu"
First, si ay u gudbi karaan fikrado aad u sahlay ku saabsan ogolaanshaha ku wargeliyay, waxaan doonayaa in aan kuu sheego badan oo ku saabsan tijaabooyinka beerta inaad wax ka barato takoorka (kuwaas oo waxaa qariyey yara ee cutubka 4 iyo sidoo). In waxbarashada kuwan, codsadayaasha been abuur ah kuwaas oo ay leeyihiin sifooyinka-sida nin ama haween kala duwan-codsato shaqooyin kala duwan. Haddii hal nooc oo codsadaha uu kiraystay ee heerka sare, ka dibna cilmi soo gunaanadi karo, in ay jiri karaan takoorka ee geedi socodka shaqaalaynta. Waayo, ujeedooyinka cutubkan, waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan tijaabo waa in ay ka qaybgalayaashu ka mid ah tijaabo-shaqo-marna oggolaasho ku bixiso. Dhab ahaantii, ka qaybgalayaasha, kuwaas oo si firfircoon u khiyaanaysay by codsiyada been abuur ah. Weliba, tijaabo beerta inaad wax ka barato takoorka ayaa la sameeyey ugu yaraan 117 waxbarashada ee 17 dal (Riach and Rich 2002; Rich 2014) .
Cilmi isticmaala tijaabo beerta inaad wax ka barato takoorka ayaa loo aqoonsaday afar muuqaalada waxbarashada, kuwaas oo in, si wadajir ah, iyaga anshax la ogolaan karo: 1) dhibaato ka kooban loo shaqeeyayaasha ah, 2) faa'iido weyn bulshada qabo qiyaas la isku hallayn karo oo takoor ah, 3) itaaldarrada habab kale oo lagu qiyaaso takoorka, iyo 4) xaqiiqada ah in khiyaamo uusan si xoog leh oo aan ku xadgudbin xeerarka of goob in (Riach and Rich 2004) . Mid kasta oo ka xaaladahaan waa muhiim, iyo wax iyaga ka mid ah ma aysan ka dhergiyey, kiiska anshax noqon lahaa dheeraad ah oo adag. Saddex ka mid ah muuqaalada kuwaas oo laga dheefay karaa mabaadi'da anshaxa ee Report Belmont, oo dhibaato oo kooban (Ixtiraamka Dadka iyo Raxmaan) iyo lacagta weyn iyo daciifnimo ah hababka kale (Raxmaan iyo Justice). feature The final, non-xadgudub ku ah xeerarka xaaladeed, laga dheefay karaa Ixtiraamka Report Menlow ee Law iyo Public Interest. In si kale loo dhigo, codsiyada shaqada waa meel halkaas oo horeba waa filasho qaar ka mid ah khiyaanada ay suurtagal tahay. Sidaas darteed, tijaabo kuwan ma nijaasayn muuqaalka horeba sanayd ee anshaxa.
Waxaa intaas dheer in this muran mabaadi'da ku salaysan, daraasiin IRBs ayaa sidoo kale ku soo gabagabeeyey in la'aanta ah ee ogolaanshaha ee Daraasaadka waa waafaqsan xeerarka hadda jira, gaar ahaan Common Rule §46.116, qayb (d). Ugu dambeyntii, maxkamadaha Mareykanka ayaa sidoo kale taageeray la'aanta ah ee ogolaanshaha iyo khiyaano in tijaabo beerta si loo cabbiro takoorka (No. 81-3029. United States Maxkamadda Racfaanka, todobaad Circuit). Sidaas darteed, isticmaalka tijaabo beerta oo aan ogolaansho waa waafaqsan jira mabaadi'da anshaxa iyo xeerarka hadda jira (ugu yaraan xeerarka dalka Maraykanka). sababaynta Tani ayaa ay taageereyso bulshada cilmi bulsho ballaadhan, daraasiin IRBs, oo ay Maxkamadda Racfaanka Maraykanka ah. Sidaas darteed, waa in aan diido xeerka fudud "oggolaansho la wargeliyey wax walba." Tani ma aha sharci in cilmi-raac, hana waa sharci in cilmi waa in la raaco.
Ka gudubka "oggolaansho la wargeliyey wax walba" ka baxo cilmi leh su'aal adag, waxa foomamka ogolaanshaha loo baahan yahay wixii noocyada kala duwan ee cilmi-baarista? Dabcan, waxaa jiray dood ka hor la taaban karo ku dhawaad ​​su'aashan, inkasta oo intooda badan waxaa ka mid ah waa in macnaha guud ee cilmi-baarista caafimaad ee da'da analog ah. Koobaya dood in, Eyal (2012) qoray:
aragti muhiim ah ka this dood ka hor waa in oggolaansho la wargeliyey ma aha oo dhan ama waxba ma aha, waxaa jira noocyo xoog iyo taagta daran ee ogolaansho. Xaaladaha qaarkood, oggolaanshahaaga adag xog muuqataa lagama maarmaan ah, laakiin, xaalado kale, foomamka taagta daran ee ogolaansho laga yaabaa inay ku haboon. Next, waxaan ku tilmaami doonaa saddex xaalado ay cilmi ku dhibtoon doonto inay hesho oggolaansho la wargeliyey ka dhammaan dhinacyada ay dhibaatadu saameysey iyo xoogaa fursado ah xaaladaha kuwa.
First, mararka qaarkood ka qaybgalayaasha weydiinaya si ay u bixiyaan oggolaansho la wargeliyey kordhin kartaa halista ah in ay la kulmaan. Tusaale ahaan, in Encore, waydiinaya dadka ka yar dawladaha cadaadis ku nool si ay u bixiyaan oggolaansho u leedahay in ay computer loo isticmaalo cabbirka of faafreebka Internet meel laga yaabaa in kuwa raacsan halis soo kordha. Marka ogolaansho keenaysaa in halista sii kordhay, cilmi hubiyo kartaa macluumaad ku saabsan waxa ay samaynayaan waa dadweynaha iyo in ay tahay suuragal ah in ka qaybgalayaasha in ay doortaan-baxay. Sidoo kale, waxay doonayaan inay yaabaa ogolaansho ka kooxaha in wakiil ka qaybgalayaasha (tusaale ahaan, NGOs).
Second, mararka qaarkood isagoo ogolaansho xog buuxda ka hor waxbarasho bilaabmin tanaasul laga yaabaa qiimaha sayniska ee daraasadda. Tusaale ahaan, in cudurkeenaha Qiirada, haddii ay ka qaybgalayaashu ogaan lahaa in cilmi Falayeen tijaabo ah oo ku saabsan dareenka, taas oo laga yaabo beddelay dhaqanka. macluumaadka laga jaro qayb-galayaasha, oo xataa iyaga wax khiyaaneeya, ma aha wax aan caadi ahayn in cilmi bulsho, gaar ahaan tijaabo shaybaarka ee cilmi nafsiga. Haddii ogolaansho wargeliyay suurtogal ma aha hor daraasad bilaabmaa, cilmi waayeen (oo sida caadiga ah la sameeyo) ka qaybgalayaasha Xilakiii ka dib markii daraasad ay ka badan tahay. Iswaraysi dambe guud waxaa ka mid ah sharxaya wixii dhab ahaan u dhacay, remediating wax waxyeellooyinka, iyo helitaanka ogolaanshaha ka dib markii xaqiiqda ah. Waxaa jira dood qaar ka mid ah, si kastaba ha ahaatee, oo ku saabsan in iswaraysi dambe in tijaabo beerta ku habboon, haddii iswaraysi dambe laftiisa waxay sababi kartaa waxyeello ka qaybgalayaasha (Finn and Jakobsson 2007) .
Saddexaad, mararka qaar waa Ma'aha shaqayn karto si aad u hesho oggolaansho la wargeliyey ka qof walba saamaysay aad daraasadda. Tusaale ahaan, cilmi-ah oo uu rabo inuu waxbarto blockchain Seeraar ah (Seeraar waa crypto-lacagta iyo blockchain waa rikoor ah oo dhan xawaalad Seeraar qiyaasi (Narayanan et al. 2016) ). Dadka qaar ayaa isticmaala Seeraar filan oo waxay jeclaan magaciisa, iyo xubno ka mid ah bulshada Seeraar u diidid laga yaabaa in noocyada qaar ka mid ah cilmi baaris ku bulshadooda. Nasiib darro, waa wax aan macquul aheyn in la helo ogolaansho ka qof kasta oo uu isticmaalaa Seeraar sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah dadkan waa qarsoodi. Xaaladdan oo kale, cilmi-isku dayi kartaa in aad la xiriirto muunad ka mid ah dadka isticmaala Seeraar oo weydiiso in ay oggolaansho la wargeliyey.
Kuwani saddex sababood oo cilmi laga yaabaa in aanay awoodin inay helaan ogolaanshaha halis-kordhaya xog, dhimin gool cilmi, iyo saadka ma xadeynta-jira sababo kaliya in cilmi-halgan si ay u helaan oggolaansho la wargeliyey. Oo, xal ah in aan soo jeediyay in-wacyigalinta dadweynaha ee ku saabsan cilmi-baarista, awood ah lagaga bixi, doonaya ogolaansho ka-dhinac saddexaad, iswaraysi dambe, oo doonaya ogolaansho ka muunad ka mid ah ka qaybgalayaasha-laga yaabaa in aanay suurto gal ah in kiisaska oo dhan. Dheeraad ah, xataa haddii kale kuwanu waa suurto gal, laga yaabaa in aanay ku filan oo aad waxbarasho. Waa maxay tusaalooyinka ku sameeyo show, si kastaba ha ahaatee, waa in oggolaansho la wargeliyey ma aha oo dhan ama waxba, iyo in xal hal abuur leh hagaajin kartaa dheelitirka anshaxa waxbarashada oo aan ka heli kartaa oggolaansho la wargeliyey buuxa ka dhammaan dhinacyada saamaysay.
Si gabagabeeyo, halkii ay ka "oggolaansho la wargeliyey wax walba" cilmi waa, karaa, oo samayn raaco xeerka sii adag oo kale, ". Nooc ka mid ah ogolaanshahaaga waxyaalaha ugu wada" ogolaansho ka muujiyay in marka la eego mabaadii'da, wargeliyay ma lagama maarmaan mana filan mabaadii'da of Ixtiraamka Dadka [ Humphreys (2015) ; p. 102]. Dheeraad ah, Ixtiraamka Dadka waa kaliya mid ka mid ah mabaadi'da ah oo u baahan in la dheelitiro marka anshaxa cilmi baarista, waa in aan si toos ah qarqin Raxmaan, Caddaaladda, iyo Ixtiraamka Law iyo Public Interest, hal dhibic si joogta ah sameeyey by ethicists ka badan 40 sano ee la soo dhaafay [ Gillon (2015) ; p. 112-113]. Ka muujiyay in marka la eego qaab anshax, wargeliyay oggolaanshaha wax walba waa meel dhigin deontological in dhaco dhibbanaha xaaladaha sida Timebomb (eeg Qaybta 6.5).